Fitsanganana amin'ny maty sy fiavian'i Jesosy fanindroany - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
haino aman-jery > Journal succession > 2016-03 mpandimby ny Magazine > Fitsanganana amin'ny maty sy fanindroany an'i Jesosy
Ao amin’ny Asan’ny Apostoly 1,9 Izao no voalaza amintsika: “Ary rehefa nilaza izany Izy, dia niseho, ary nisy rahona nanala Azy tamin’ny masony”. Amin'izao fotoana izao dia te-hametraka fanontaniana tsotra aho: Nahoana? Nahoana i Jesosy no nesorina tamin’izany fomba izany? Alohan’ny hahatongavantsika amin’izany anefa, dia aoka hovakintsika ireto andininy telo manaraka ireto: «Ary raha nahita Azy niakatra ho any an-danitra izy ireo, dia, indreo, nisy roa lahy niakanjo akanjo fotsy nitsangana teo aminy. Hoy izy ireo: Ry lehilahy Galilia, inona no mijanona eto mijery ny lanitra? Io Jesosy io, Izay nakarina niala taminareo ho any an-danitra, dia mbola ho avy indray, tahaka ny nahitanareo Azy niakatra ho any an-danitra. Dia niverina nankany Jerosalema izy ireo avy teo amin’ny tendrombohitra atao hoe Tendrombohitra Oliva, ary akaikin’i Jerosalema, izay lavitra Sabata.
Ity andalana ity dia mamaritra ny roa: ny niakaran'i Jesosy tany an-danitra ary hiverina indray Izy. Ireo zava-misy roa ireo dia zava-dehibe ho an'ny finoana kristiana ary noho izany, ohatra, dia mifototra amin'ny fitsanganana amin'ny apôstôly ihany. Nankany an-danitra aloha Jesosy. Ny fiakarana dia nankalazaina 40 andro aorian'ny Paska isan-taona, amin'ny alakamisy foana.
Ny teboka faharoa izay mamaritra ity andalan-teny ity dia ny hahatongavan'i Jesosy amin'ny fomba izay natombony ihany koa. Izany no antony mahatonga ahy mino fa nandao an'ity tontolo ity tamin'ny fomba hita maso i Jesosy.
Tena mora tamin'i Jesosy ny nampahafantatra ny mpianany fa handeha any amin'ny rainy izy ary hiverina indray. Taorian'izay dia ho nanjavona tsotra izao izy, toy ny nataony hatrizay. Afa-tsy hoe tsy ho hita indray izy izao amin'ity indray mitoraka ity. Tsy azoko atao ny mieritreritra antony ara-teôlôjia hoe nahoana i Jesosy no nandao ny Tany tamin'ny fomba feno, fa natao Izy mba hampianarana ny mpianany, ary noho izany antsika koa.
Tamin'ny alàlan'ny fanjanahana an-habakabaka no nanamafisan'i Jesosy mazava fa tsy hoe tsy hanjavona fotsiny, fa hiakatra any an-danitra izy mba hanelanelana eo ankavanan'ny Ray ho antsika ho Mpisoronabe mandrakizay ary hametraka teny tsara. Araka ny nolazain'ny mpanoratra iray hoe: "solontenantsika any an-danitra izahay". Manana olona any an-danitra isika izay mahatakatra hoe iza isika, afaka mahazo ny fahalementsika ary mahalala ny zavatra ilaintsika satria olombelona ihany izy. Na dia any an-danitra aza dia samy izy: ny olombelona rehetra ary Andriamanitra rehetra.
Na dia aorian'ny fiakarana aza, izy dia voatonona ao amin'ny Baiboly ho toy ny olombelona. Rehefa nitory tamin'ireo mponin'i Atena tao Areopagus i Paoly dia nilaza fa hitsara an'izao tontolo izao Andriamanitra amin'ny alàlan'ny olona iray nofariny ary i Jesosy Kristy io olona io. Rehefa nanoratra tamin’i Timoty izy dia niantso azy hoe Kristy Jesosy. Olombelona izy ankehitriny ary mbola manana vatana ihany. Natsangana tamin'ny maty ny vatany ary nitondra azy ho any an-danitra.
Izany dia mitarika ny fanontaniana hoe aiza ny tenany ankehitriny? Amin'ny fomba ahoana, Andriamanitra, izay tsy hita maso ary noho izany tsy mifatotra amin'ny habaka, ny raharaha ary ny fotoana, dia manana vatana izay ao amin'ny toerana iray ihany? Ny vatan'i Jesosy Kristy ao amin'ny habakabaka ve? Tsy haiko. Tsy haiko hoe ahoana i Jesosy no miseho ao ambadiky ny varavarana mihidy na ny fomba ahafahany mankany an-danitra na inona na inona fahasarotana. Toa tsy mihatra amin'ny vatan'i Jesosy Kristy ny lalàna ara-batana. Mbola vatana ihany izy io, saingy tsy misy fetrany izay mety ho vatantsika.
Mbola tsy mamaly ny fanontaniana hoe aiza ny tenany ankehitriny. Tsy ny zava-dehibe indrindra ihany koa anefa no manahy! Mila fantarintsika fa any an-danitra i Jesosy, fa tsy any amin'ny fipetrahan'ny lanitra. Zava-dehibe kokoa ny hahafantarantsika izao manaraka izao momba ny vatan'i Jesosy ara-panahy - ny fomba fiasan'i Jesôsy eto ary eto an-tany eto amintsika dia amin'ny alàlan'ny Fanahy Masina.
Rehefa niakatra tany an-danitra niaraka tamin'ny vatany i Jesosy, dia nohazavainy fa mbola hitohy ho olombelona sy Andriamanitra izy. Manome toky antsika izy fa izy dia mpisoronabe mahalala ny fahalementsika, toy ny voasoratra ao amin'ny taratasy ho an'ny Hebreo. Ny fiakarany hita maso any an-danitra dia manome toky antsika fa tsy vitan'ny hoe tsy nanjavona fotsiny, fa nanohy ny maha-mpisoronabe sy mpanelanelana antsika.
Antony iray hafa
Raha ny hevitro dia misy antony iray hafa nahatonga an’i Jesosy hita maso nandao antsika. Nilaza tamin’ny mpianany Izy ao amin’ny Jaona 16,7 izao: “Fa Izaho milaza ny marina aminareo: tsara ho anareo ny fialàko. Fa raha tsy miala Aho, dia tsy ho avy aminareo ny Mpananatra. Fa raha handeha Aho, dia hirahiko ho atỳ aminareo izy.
Tsy fantatro tsara ny antony, fa toa tsy maintsy hiakatra any an-danitra i Jesosy alohan'ny Pentekosta. Rehefa nahita an'i Jesoa nitsangana ny mpianatra dia efa nahazo ny teny fikasana ny handray ny Fanahy Masina, koa tsy nisy ny alahelo, farafaharatsiny mba tsy nisy voalaza ao amin'ny bokin'ny Asan’ny Apostoly. Tsy nisy nalahelo fa tapitra ny andro taloha misy nofo sy ra. Tsy nohamainina ilay taloha, fa ny hoavy kosa nojerena tamim-pitandremana. Nisy fifaliana noho ireo zavatra lehibe kokoa izay nambaran'i Jesosy sy nampanantenainy.
Raha manohy mamaky ny Asan'ny Apostoly isika dia hahita toe-tsaina milamina eo amin'ireo mpanaraka ny 120. Nihaona sy nivavaka ary nikasa ny asa izay tokony hatao izy ireo. Noho ny fahafantarana fa nanana iraka izy ireo dia nifidy apostoly vaovao iray hameno ny toeran'i Jodasy Iskariota. Fantatr'izy ireo ihany koa fa mila lehilahy roa ambin'ny folo izy ireo hisolo tena ny Isiraely vaovao izay nokasain'Andriamanitra hatsangana. Nivory ara-barotra izy ireo satria niasa. I Jesosy dia efa nanome azy ireo ny asa rehefa lasa miakatra an'izao tontolo izao ireo vavolombelony. Ny hany tsy maintsy nataony dia ny niandry tao Jerosalema, araka ny nolazainy azy ireo, mandra-paha-feno azy ireo ny hery avy any ambony ka nahazo ny mpanome fampanantenaina.
Ny fiakarana an'i Jesosy dia fotoanan'ny fihenjanana: niandry ny dingana manaraka ny mpianatra mba hahafahany manitatra ny asany, satria nampanantenain'i Jesosy fa hanao zavatra lehibe kokoa amin'ny Fanahy Masina izy ireo fa tsy i Jesosy. Jesosy àry no nampanantena zavatra lehibe kokoa.
Niantso ny Fanahy Masina i Jesosy hoe "mpionona hafa". Amin'ny Grika dia misy teny roa ho an'ny "iray". Ny iray dia midika hoe "zavatra mitovy" ary ny iray kosa dia "zavatra hafa". Jesosy dia nampiasa ilay fitenenana hoe "zavatra mitovy amin'izany". Ny Fanahy Masina dia toa an'i Jesosy. Ny fanahy dia fisehoan'Andriamanitra manokana fa tsy hery avy amin'ny hery fotsiny.
Velona sy mampianatra sy miteny ary mandray fanapahan-kevitra ny Fanahy Masina. Ny Fanahy Masina dia olona, ​​olona avy amin'Andriamanitra ary ampahan'Andriamanitra.Ny Fanahy Masina dia mitovy amin'i Jesosy ka afaka miresaka an'i Jesosy izay mipetraka ao amintsika sy ato am-piangonana koa. Jesosy dia nilaza fa mijanona amin'izay mino sy mitoetra ao ary io mihitsy no ataony ao amin'ny Fanahy Masina. Nandao Jesosy, nefa tsy navelany ho irery izy. Niverina tamin'ny alàlan'ny Fanahy Masina izay mitoetra ao amintsika Izy, fa ho avy amin'ny fomba ara-batana sy hita maso ihany koa ary mino aho fa izany no tena fototry ny fiakarany hita maso. Noho izany dia tsy azontsika atao ny milaza fa i Jesosy dia efa misy amin'ny endrika ny Fanahy Masina ary tsy tokony hanantena azy bebe kokoa noho izay efa ananantsika isika.
Tsia, nohamafisin'i Jesosy mazava tsara fa ny fiverenany dia tsy ho iraka tsy hita maso sy miafina. Ho vita tsara izany. Ahitana ny hazavan'ny andro ary ny masoandro miposaka. Ho hita eo amin'ny rehetra io, toy ny nahitan'ny Andro Fiakarana azy rehetra izay hitan'ny rehetra tao amin'ny Tendrombohitra Oliva efa ho 2000 taona lasa izay, ary manome fanantenana antsika izany, fa afaka manantena mihoatra noho izay ananantsika ankehitriny. Ankehitriny isika mahita fahalemena be. Ny fahalemena ao amintsika, ao amin'ny fiangonantsika ary amin'ny finoana kristiana iray manontolo. Manantena izahay fa hiova ny zavatra ho tsara kokoa, ary manana ny fampanantenan'i Kristy izy fa hiverina lehibe sy hampiditra ny Fanjakan'Andriamanitra lehibe sy matanjaka kokoa noho izay azontsika sary an-tsaina. Tsy havelany hisy toy ny ankehitriny.
Hiverina toy ny niakarany tany an-danitra izy: hita maso sy ara-batana. Na ny antsipirian-javatra izay heveriko fa tsy manan-danja manokana dia ho hita ao: ny rahona. Tahaka ny niakarany tamin'ny rahona, dia hiverina amin'ny rahona koa izy. Tsy fantatro ny dikan'ny rahona; toa an’ireo anjely niara-nandeha tamin’i Kristy ireo rahona, nefa mety ho rahona ara-batana ihany koa. Mandalo fotsiny no lazaiko. Ny zava-dehibe indrindra dia ny fiverenan’i Kristy amin’ny fomba manaitra. Hisy tselatra hazavana, tabataba mafy, famantarana mahagaga amin'ny masoandro sy ny volana ary ho hitan'ny rehetra izany. Tsy isalasalana fa ho fantatra izany ary tsy hisy hilaza fa mitranga any an-kafa izany. Tsy misy isalasalana fa hitranga eny rehetra eny amin’ny fotoana iray ihany ireo fisehoan-javatra ireo.Rehefa mitranga izany, dia lazain’i Paoly amintsika ao im 1. Taratasy ho an’ny Tesaloniana, hiakatra hitsena an’i Kristy eny amin’ny rahona eny amin’ny habakabaka isika. Ity fanao ity dia fantatra amin'ny anarana hoe fampakarana ary tsy hitranga an-tsokosoko. Fampakarana ampahibemaso izany satria ny olona rehetra dia afaka mahita an'i Kristy miverina eto an-tany. Koa ho anisan’ny niakaran’i Jesosy ho any an-danitra isika, tahaka ny maha anisan’ny nanomboana Azy tamin’ny hazo fijaliana sy ny fandevenana Azy ary ny nitsanganany tamin’ny maty, ary isika koa dia hiakatra any an-danitra hitsena ny Tompo rehefa hiverina Izy, ary hiara-miverina eto an-tany isika.
Manisy fiovana ve izany?
Tsy fantatsika hoe rahoviana no hitranga izany rehetra izany. Koa misy fiovana eo amin’ny fiainantsika ve izany? Tokony ho. ao amin'ny 1. Korintiana sy 1. Nolazaina tamin’i Jaona izany. Avelao izahay 1. Johannes 3,2-3 fijery:
«Ry malala, efa zanak 'Andriamanitra isika; fa izay mbola ho tiana dia tsy mbola nipoitra. Fantatsika anefa fa raha toa miharihary izany, dia ho tahaka Azy isika; satria ho hitantsika Izy tahaka azy. Ary izay rehetra manana izany fanantenana izany dia manadio ny tenany, tahaka ny fahadiovany. »
Avy eo i Jaona dia nilaza fa mihaino an'Andriamanitra ny mpino ary tsy te hiaina fiainana manota. Misy fiatraikany azo ampiharina amin'ny zavatra inoantsika izany. Ho avy indray i Jesosy ary hitovy toa azy isika. Tsy midika akory izany fa ny ezaka ataontsika dia hamonjy antsika na ho very ny fahotantsika, saingy tsy te hanota ny sitrapon'Andriamanitra isika.
Ny famintinana ara-baiboly faharoa dia ao amin’ny Korintiana voalohany ao amin’ny toko 15. Rehefa avy nanazava ny fiverenan’i Kristy sy ny fitsanganana amin’ny maty ho amin’ny tsy fahafatesana i Paoly dia nanoratra izao manaraka izao ao amin’ny and. 58:
"Ary amin'izany ry rahalahiko malala, mahereza, miorena tsara ary mitombo hatrany amin'ny asan'ny Tompo, satria fantatrareo fa tsy foana ny asan'ny Tompo ao aminy."
Misy asa tokony hataontsika, toy ny nataon'ireo mpianatra voalohany. Nomeny antsika koa ny baiko nomen'i Jesosy azy ireo. Ny iraka ataontsika dia ny mitory sy mizara ny vaovao tsara. Nahazo ny Fanahy Masina isika mba hahafahantsika manao izany.Tsy mijoro mijery manodidina ny lanitra isika ary miandry an'i Kristy. Isika koa dia tsy mila ny Baiboly mandritra ny fotoana marina. Milaza amintsika ny soratra masina mba tsy hahafantatra ny fiverenan'i Jesosy. Fa kosa, manantena isika fa hiverina i Jesosy ary tokony ho ampy ho antsika izany. Misy ny asa tokony hatao. Manapa-kevitra momba ny maha-olona antsika ho an'ity asa ity isika. Izay no antony mahatonga antsika hitodika any aminy satria tsy foana ny fiasan'ny Tompo.